Etu ị ga - esi nweta cryptocurrencies na Binance Liquid Swap - Cazoo
Mbido » Mbido » Etu ị ga - esi nweta cryptocurrencies na Binance Liquid Swap
Tag: Binance Liquid gbanwee, ọnwụ na-adịgide adịgide, mmiri mmiri na-eweta, ọnwụ na-adịgide adịgide, Ọdọ mmiri, Ụlọ ahịa Stablecoin, Mmụba, Ka ịkọ ugbo
Oge ogugu: 4 minuti
Ọ bụrụ na nke a bụ oge izizi gị ebe a, nnabata / nnabata!
N'ebe a na Cazoo m na-edekọ ndetu m na njem m gaa na ala a tọgbọrọ n'efu nke cryptocurrencies. Gịnị kpatara m ji eme ya? Gịnị mere na anaghị m edebe ya n’onwe m? Gịnị kpatara Kekọrịta bụ Ilekọta! Ihe niile m mụtara, a m mụtara site n’ịgụ mmadụ ma ọ bụ site n’inyocha ọdịnaya onye ọzọ. Oge inyeghachi obodo.
Ị nwere ekele maka ya? Debanye aha na Binance, ọ bụrụ na idebeghị aha gị, jiri koodu ntinye aka m! Ntụgharị aka m bụ EIXFBK06, ma ọ bụ ị nwere ike pịa ebe a.
Dịka m kwuburu, Cazoo bụ njem njem, abughi m onye ndụmọdụ ego. Emela ka ndudue nke itinye ego i nwere ike imeli. Ntinye ego a di oke njo: ma oburu na ikpachapu anya, i ghaghi enweta ego gi, ichoro ime ihe nile ichoro ime. Enwere m ike ịnye gị otu ndụmọdụ, kpachara anya / kpachara anya.
Gịnị bụ Binance Liquid Swap
Kedu ka Binance Liquid Swap si ekpebi ọnụahịa nke cryptocurrencies?
Gịnị kpatara Binance Liquid Swap?
Kedu ka Binance Liquid Swap si arụ ọrụ?
Kedu ka ị si enweta ego na Liquidity Swap?
Ego ole bụ uru na ịnye ego maka otu ụzọ crypto?
Ebee ka ị na-ahụ uru na ọghọm?
Binance Liquid Swap dabere na ụkpụrụ ahụ, nke a na-ejikarị n'ime ụwa DeFi, nke "ọdọ mmiri mmiri mmiri" (Ọdọ mmiri ọdọ mmiri) iji zụọ ahịa cryptocurrencies.
Ọnụahịa nke crypto A ga-ekpebisi ike site na ọnụọgụ nke cryptocurrencies na ọdọ mmiri mmiri.
Otu Binance Liquid Swap na-ekpebi ego nke cryptocurrencies?
Binance Liquid Swap na-eji usoro pụrụ iche iji chọpụta ego azụmahịa na ọnụahịa dị n'etiti cryptocurrencies abụọ ahụ. Kedu ndị na-emetụta Ahịa Crypto? Ndị ahịa, nke gbanwere ma ọ bụ tinye ego na ọdọ mmiri mmiri. N'otu aka ahụ, ndị ahịa na-agbakwunye ma wepu ego site na ọdọ mmiri mmiri ahụ na-etinye aka na ịme ahịa ahịa (na jargon anyị na-agụkarị AMM, Onye Na-eme Ahịa Akpaaka).
Site na Binance Liquid Swap, ndị chọrọ ịme azụmahịa n'etiti cryptocurrencies nwere ike ịgbanwe ha ngwa ngwa. Ma nke ahụ abụghị ihe niile!
o kwekwara omume irite mmasị site n'ịgbakwunye liquidity na ọdọ mmiri ahụ.
Gbanwee cryptocurrencies na sekọnd- N'ime usoro a, obere azụmahịa agaghị eweta mgbasa ọ bụla, ebe azụmahịa ka ukwuu ga-ebelata ya nke ukwuu nhichapu site na mgbanwe. Ndị ahịa nwere ike ịnụ ụtọ ọnụahịa kwụsiri ike na ọrụ asọmpi.
Tinye ego ma rite uru site na njigideNdị ahịa na-agbakwụnye ego na ọdọ mmiri ahụ ga-enweta otu akụkụ nke ụgwọ azụmahịa azụmahịa na -emepụta ma nwee mmasị na cryptocurrencies. Mara nke ọma- Enwere ike iwepu ego na ọdọ mmiri dabere na ikere òkè na ọdọ mmiri ahụ. Site na mwepụ ọ ga-ekwe omume ịnweta ego abụọ nke ụzọ ahọpụtara n'ụzọ dabara adaba, ma ọ bụ ọ ga-ekwe omume ịhọrọ inweta naanị otu. Ọ bụrụ n’ịhọrọ ịnata naanị otu cryptocurrency, ị ga-akwụ ụgwọ azụmahịa, nke a ga-ewepụ site na ego ị nwetara.
Iji malite iji Binance Liquid gbanwee ị ga-aga Ego> Liquid Swap.
Binance: Ego> Liquid gbanwee
N'ime ị ga-ahụ ụdị ngwaahịa abụọ: mụ e Innovation.
Ngwaahịa na-akwụghị ọtọ na ngwaahịa Innovatoin
mụ na-ezo aka na ọdọ mmiri nwere mmiri nke ego, dị ka BUSD na DAI.
Innovation na-ezo aka liquidity ọdọ mmiri nke ihe ndị na-agbanwe agbanwe, dika ETH, BTC na ọbụna GBP, nwekwara ego fiat.
Mgbe ị gbakwunyechara akụ gị na ọdọ mmiri, a ga-enye gị otu share, a ga-enye gị (dị obere) akụkụ. Mgbe ọ bụla a gbanwere n'ime ọdọ mmiri ahụ, a ga-enye gị otu akụkụ nke ọrụ ahụ, dabere na òkè gị, òkè gị. Easy peasy.
Binance Liquidity Swap: Ekekọrịta enwetara site n'inye ego ahụ
N'elu Liquid Swap bụ atụmatụ nke mkpụrụ, mmasị a na-enweta, maka ụzọ abụọ enwere ike ịnye ego.
Atụmatụ nke mkpụrụ, nke mkpụrụ, maka ụzọ ego abụọ
A na-agbakọ nloghachi niile dabere na usoro nke na-egosipụta mmasị akwụ ụgwọ ụnyaahụ na ụgwọ ahịa niile:
Ulakpụrụ: (ego a na-akwụ ụgwọ ụnyaahụ + ego a na-akwụ ụgwọ ụnyaahụ) / ọnụahịa nke ọdọ mmiri n'etiti abalị ụnyaahụ * 365.
Tụgharị otu n’ime mkpụrụ ego abụọ na-egosi gị mkpụrụ ya.
Enweta uru na ọghọm na Ekekọrịta m ma were ọnụ na USD.
Etu esi lelee ego esi enweta ego na Binance Liquid Swap
Enweghi ihe mkpuchi crypto n’enweghi isi? Rkwụ ụgwọ ụlọ iji nweta ego na-aga n'ihu na cryptocurrencies abụghị echiche ọjọọ, ị naghị eche?
Mana buru n'uche na ọdọ mmiri ndị Innovation na-erite oke volatility, n'ihi ọnụego mgbanwe ahịa na oke nke ọdọ mmiri ahụ. Ihe ndị a nwere ike ibute ngbanwe buru ibu na uru ị tinyere n'ime oge 24.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị ghọọ a Liquidity na-eweta nwere ike ịba uru dị ukwuu, ọnwụ na-adịgide adịgide bụ echiche bụ isi dị mkpa iji ghọta, ka ịghara itinye ihe niile n'iyi.
Anyị ga-ekwu maka ya n’oge adịghị anya.
M na-echetara gị na ọ bụrụ na ịdebeghị Binance, ị nwere ike ime ya na ịpị njikọ a. Ma ị nwere ọrụ ewepu 20%, ruo mgbe ebighị ebi!
Isiokwu ọzọKedu ihe bụ AMM, Onye nrụpụta ahịa akpaaka?
Pbọchị Pizza Pizza - Binance na-enye BTC Pizza $ 52.200